Kedu ihe ịchọ mma na-eji kpakpando
Otutu ndi mmadu ndi mmadu no n'uwa bu ndi di ebube ha na-achoghi na mama Nature, kamakwa iji tinye ocha.
Onye nlekọta mara mma mara mma (mgbe ịwa ahụ plastic) ga-abụ ihe ịchọ mma, nke na-enyere ha aka ịdị na-ele anya mgbe niile, na-eleghara mmezighị emezi ma na-egosipụta àgwà ọma. Ka anyị gbalịa ileba anya na ihe ịchọ mma ha ma chọpụta ihe ịchọ mma nke kpakpando na-eji.
Onye nwe ya nke kachasị mma na Hollywood, bụ Jennifer Aniston, n'eziokwu adịghị edozi, ma uwe ntutu isi, na ntutu aka ya bụ Aniston ji n'aka ya bụ Chris McMillan. Iji mepụta irighiri Jennifer, Chris na-eji ngwongwo Scampting Foam fochie ya site n'aka onye a ma ama Paul Mitchell, na ọkụ ọkụ na-agba na mpempe mmiri. Nchikota ndi mmadu a na-aru ma na-eme ka onye isi omeeji di ire, na-etinye ntakiri ntakiri mmiri.
Beyonce na-egwu egwu na-eji ọgwụ cosmetics Aquaphor. Nri maka ihu ụlọ ọrụ a, ọ na-ahọrọ ka ọ na-etinye ọbụna na ntutu isi, iji mee ka ha dị ọcha, nakwa dị ka egbugbere ọnụ ya, iji nweta ihe na-adọrọ adọrọ.
Na mberede, ụra gbawara onye omempụ Hollywood Blake N'ịbụ onye onye ọ bụla mara na TV usoro "Gossip Girl," kwetara na ọ bụ site na lipstick na Yves Saint Laurent ka a na-emepụta ya. Na iji chekwaa ịma mma na ntorobịa nke akpụkpọ ahụ ya, Blake ji Laundry Care.
Ihe ngosi nke ịke na nwunye nke egwuregwu kasị mma na football na ụwa Victoria Beckham na-ahọrọ ụzọ dị oké ọnụ ahịa. Maka nlekọta akpụkpọ anụ, ọ na-eji ngwaahịa ndị a ma ama La Praire, ihe kachasị amasị ya na ika a bụ Mgbochi Mgbakasị Nlekọta Anya - onye na-elekọta anụ ahụ maka nku anya.
Onye omekorita, nke bu ihe omuma nke onyinyo nke Hollywood nke Evan Rachel Wood, nwere aru ocha na ihe na-adighi nma. Nnukwu ilekọta akpụkpọ ahụ ya na-eme ka ndị Japan na-ahụ maka ihe ịchọ mma Shiseido. Ọzọkwa, onye omeeji ahụ kwetara na ọ pụghị ịhapụ ụlọ n'ejighị anya nwa eyeliner kachasị amasị ya.
Ụfọdụ kpakpando na-eji naanị ihe ịchọ mma iji chekwaa nwa okorobịa na-enweghị ike ịwa ịwa ahụ plastik, dị ka ihe nkiri Hollywood onye na-egwu egwu Julia Roberts kwetara na ọ na-ahọrọ ịdị na-eme ihe dị mma, ọ dịtụbeghị mgbe enyemaka nke ndị dọkịta na-awa ahụ. Ihe kachasị amasị ya bụ ihe nlekota nke oji, ma ka na-eme ya kwa ụbọchị, Julia na-atụ egwu na ọ ga-ejide ọrịa strok na-adị ka Sophia Loren. Banyere ihe ịchọ mma, Roberts nọgidere na-adịgide adịgide n'anya ya.
Singer Fergie nwere ngwá ọrụ egosipụtara iji nyere aka weghachite ntutu isi mgbe ọ nwụsịrị na nhazi. N'uhuruchi ọbụla, onye ọbụ abụ ji nlezianya na-ehichapụ ihe niile ọ na-emepụta na ntutu isi ya ma na-emikpu ya n'osisi mmanụ Moroccan, wee tinye ntutu isi ya n'ite bat ma hapụ ihe mkpuchi maka abalị ahụ. N'ụtụtụ, a na-asacha mmanụ na ncha. Dị ka Fergie si kwuo, ihe nkpuchi a na-eme ka ntutu dị nro ma dị nro.
Kpakpando nke ala ụwa, ihe nlereanya German bụ Heidi Klum, kwetara na mgbe ụfọdụ, akpụkpọ anụ ya, na maka akpụkpọ ahụ ọ na-eji akwa akwa nke Tatka japan Japan, nke a na-eme dịka ntụziaka oge ochie nke Geishas geishas site na akwụkwọ nke abaca nwere gold microparticles.
Sultry beauty Salma Hayek kwuru na ya na-eji ụzụ zoo, nke na-enyere aka zoochi ọchịchịrị n'okpuru anya. Ụzọ kachasị amasị nke omee ahụ bụ concealer Touche Eclat si Yves Saint Laurent, na lipstick na blush Salma na-ahọrọ ịzụta site na French French Laura Mercier.
Onye na-eme ihe nkiri Hollywood Courtney Cox na-ele ya anya nke kachasị amasị ya na-emepụta lipstick, bụ nke ọ na-ewere dị ka ụda akpụkpọ ahụ si dị. Courtney hụrụ ọkpụkpụ ihe si na nchachapụta nke Josie Maran mere, na egbugbere ọnụ dịka Salma Hayek, na-ahọrọ ịzụta n'aka Laura Mercier.
Onye nwe onye na-eme ihe nkiri na-eme ochie bụ Gwyneth Paltrow na-akwalite ịchọ mma ejiji si Chanel, ihe kachasị amasị ya bụ ntụ ntụ nke Poudre Universelle Libre, nke na-enye akpụkpọ ahụ ọkụ na ịdị mma.
T op-nlereanya na onye na-eme ihe nkiri bụ Molly Sims kwetara na ihe ịchọ mma ya kachasị amasị ya bụ mmanụ sitere na ụlọ ọrụ Japanese nke Kanebo na egbugbere ọnụ ya na Shiseido. Dị ka kpakpando ahụ si kwuo, ụdị ihe ndị a dị mma maka ihe ọ na-eme kwa ụbọchị.
Sandra Bullock Actress na-ekpori egwu ma na-eme ka akpụkpọ anụ na-eme ka ọ dị mma. Dị ka onye na-eme ihe nkiri ahụ kwetara, mgbe ọ na-eji balm a mee ka akpụkpọ ahụ ya bụrụ nke na-adọrọ adọrọ.
Anne Hathaway na-enwe mmasị ịme onwe ya na ime ụlọ ịwụ ahụ na ụfụfụ Lavender na-ezu ike na L'Occitane. "Mgbe nke a batịrị, enwere m mmetụ dị egwu n'ahụ m ma na-ehi ụra nke ọma," ka onye omee ahụ kwuru.
Supermodel Helena Christensen nwere mmasị na Mario Badescu Almond & Honey Face Scrub. , n'ihi na ọ na-enye ume ọhụrụ ma na-esi ísì ụtọ.
Onye na-eme ihe nkiri Keira Knightley nwere mmasị iji ikpokọta anya etemeete na egbugbere ọnụ nke ìhè. Ndị na-emepụta ihe na-amasị ya maka ndị na-emepụta egbugbere ọnụ na-eleba anya pensụl.
Kirsten Dunst na-egosi mgbe niile n'ihu anya igwefoto ya na chee ihu ọma. Kpakpando na eji ejiji nke si na Bourjois - egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, onye na-eme ihe nkiri ga-eme ka egbugbere ọnụ Lip Stain Pen na "Praline Dis-moi Ee, na mmetụta dị jụụ nke cheek na-enweta site na njigide nke Tarte Cheek Stain na" Flush ".
Otu n'ime ụmụ nwanyị kasị nwee mmekọahụ na ụwa, onye na-eme ihe nkiri Angelina Jolie anaghị elebara ọdịdị ya anya. Otú ọ dị, ọ na-ahọrọ ụdị onye kwuo uche ya, dịka ọmụmaatụ, ihe nhicha ọcha iji wepụ ihe eji emepụta Lush Ultra Bland Cleanser, na -ekere ahụekere butter.
Scarlett Johansson na-ahọrọ iji ihe ịchọ mma, nke na-egosipụta n'ụzọ doro anya ọdịdị dị ebube ya. Ya egbugbere ọnụ ya na-emesi egbugbere ọnụ ya ike site na Dolce & Gabbana "Ultra Shine lip gloss", na-enye egbugbere ọnụ a mirror glossy gloss.
Ịhọrọ ezigbo mascara maka nku anya
Otu esi ahọrọ ihe ịchọ mma kwesịrị ekwesị maka akpụkpọ anụ
Coenzyme Q10: ike maka mkpụrụ ndụ
Nri maka akpụkpọ ahụ gburugburu anya
Nwaanyị na-emepụta ntutu
Otu esi choputa etemeete maka ụdị ihu gị
Mkpesa maka Ụbọchị Nne maka ezumike na ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara - Ihe nkiri nke asọmpi egwuregwu maka nne na ụmụ
Nri akwa chocolate
Nri tomato na asparagus
Otu esi emeso ntutu akọrọ na ihe omumu ulo
Enweghị ígwè n'ime ahụ mmadụ
Nri salmon dị nro
Ntụziaka dị mfe maka ịdabere na ihe oriri na stew
Ugboro ala maka akpịrịkpa maka taa, 2010 afọ
Nne na nna: ọgwụ ọjọọ na ụmụaka
Ezi ndị ikom - ezigbo onyinye
Ugboro ala maka Capricorn-nwanyi maka 2016 - ịhụnanya na site n'afọ ọmụmụ
Nhazi ziri ezi nke eserese na mgbidi
Ezinụlọ Jeanne Friske malite n'ụbọchị mbụ weere Shepeleva
Ọ bụrụ na mmadụ asị na o nwere ọzọ, gịnị ka ọ ga-eme?
N'elu ala Hellas: ụdị Grik n'ime ime
Salad na tuna na ube oyibo
Poteto na moss sauces